Afar tallaabo oo daryeel lagu raadsado | På blodigt allvar
Haddaad la dhibban tahay caado-xanuun soo noqnoqda oo carqalad gelinaya noloshaada caadiga ah waa inaad daryeel raadsataa. Habdhaadhacuna waa sidaan, oo tallaabo tallaabo ah!
Tallaabada 1aad: Is-caawin
Intaadan takhtar ballan ka qabsanin, waxaa wanaagsan inaad marka hore iskaaga u tijaabiso habab aad dhibaatooyinkaaga ku sahleyso. Qor hababka aad u adeegsatay yareynta xanuunkaaga iyo sida ay kuu caawiyeen. Waa wax lagu weydiin doono haddaad mustaqbalka daryeel raadsato.
Sidaas ayaad daryeel-bixiyeyaasha ula xiriireysaa
Tallaabada 2aad: La xiriir takhtar
Haddaad ku roonaan weydo daawooyinka dhigaal-la’aanta lagu iibsado ama habab kale toona, waa inaad takhtar la xiriirtaa. Waqti dheer ha la sugin. Marka laga soo tago in xanuunku uu nolosha adkeeyo, waxay dhibaatooyinku iyana calaamad u noqon karaan inay wax khaldan jiraan.
Waa kuwee noocyada xarumaha daryeel, sideena ku haleelaa?
Rug caafimaad/xarun caafimaad/takhtar xaafadeed: Dhibaatooyinkaagu ha noqdeen ama jir ama jinsi, waxaad la xiriiri kartaa rug caafimaad. Waxaa kale oo aad saacad kasta wici kartaa 1177 oo su’aalahaaga weydiin kartaa kalkaalisada caafimaad ee halkaas kaaga jawaabeysa.
Xarun ummuliso & xarun takhaatiir dumar: Waxaad iyana si toos ah ula xiriiri kartaa xarun ummuliso ama xarun takhaatiir dumar. Si toos ah ayaad xarunta u wacan kareysaa ama Internet ayaad kala xiriiri kareysaa.
Xarun dhallinyaro: Haddaad tahay 13-23 jir waxaad la xiriiri kartaa xarun dhallinyaro. Hubso da’da xarunta xaafaddaada lagu tagi karo. Waxay inta badan leeyihiin saacado gaar ah oo ay ku qaabilaan dadka ballan-la’aanta ku yimaada, laakiin sidoo kale waad wacan kartaa oo ballan baad ka qabsan kartaa
Tallaabada 3aad: Is-diyaari!
Ballanta xarunta daryeelka ka hor waxaa wanaagsan inaad liis ku sii qoroto su’aalaha aad dooneyso inaad takhtarka weydiiso. Markaas waad xusuusaneysaa oo waad is-dabcin kareysaa.
Way ka sahlanaaneysaa inaad hesho daryeel habboon haddaad si wacan uga war hayso caadadaada iyo dhibaatooyinkaaga. Xusuusqor ama barnaamij taariikheed ee ku jira moobilkaaga ayaa ah qalab wanaagsan oo aad iyana ballanta la tagi kartid.
U diyaargarow su’aalo xasaasi ah
Arrin ay wanaagsan tahay in loo diyaargaroobo waa in la isweydiin doono su’aalo hoose oo xasaasi ah. Su’aalahu waxay ku saabsanaan karaan galmo ama faahfaahin ku xiran waxyaalaha dhiigga loo gashto, waxay iyana noqon karaan su’aalo khuseeya dheecaannada hoosta ka yimaada iyo su’aalo kale oo la mid ah. Su’aalaha waxaa la isku weydiinayaa si dhibaatada loo derso oo aad u hesho daryeel kugu habboon.
Waxaad xaq u leedahay turjubaan!
Markaad ballan ku leedahay xarun daryeel, haddaadan luuqadda ku hadlin, waxaad xaq u leedahay turjubaan. Xarumaha dhallinyarada ee dalka waxaa ka jira fursado lagu helo turjubaan takhasus gaar ah u leh inuu ka hadlo jinsiga iyo galmada. Waxaa iyana taageero ahaan kuu soo raaci kara saaxiib ama qof kale.
Ballantaada ka hor
Tallaabada 4aad – Ballan xarun daryeel
Marka la gaaro xilliga ballanta xarunta daryeelka oo aad rug caafimaad timaaddo, waxaad iska xaadarineysaa waaxda soo-dhaweynta, halkaas ayaad iyana, haddii la iska rabo, ka bixineysaa khidmad. Dabadeed waxaad fariisaneysaa qolka sugitaanka, halkaas ayaa shaqaalaha daryeelku kugu imaanayaan oo ku geynayaan qolka baaritaanka. Xusuusnow inaad adiga u taliso jirkaaga oo aad xaq u leedahay inaad baaritaanka joojiso goor kasta haddaad xaaladda u bogi weydo. Nasiib wacan!